Taariikhda kooxaha Qeybta C - BBC Somali - Cayaaraha
Taariikhda kooxaha Qeybta C
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 21 Janaayo, 2013, 15:45 GMT 18:45 SGA
Tartanka koobka Qaramada Afrika waxaa ka qeybgalaya 16 kooxood
Zambia shan iyo toban jeer ayay ka soo qaybgashay tartanka markii ugu fiicnayd waxay ku guulaysatay koobka sanadkii 2012.
Naadigan ayaa koobkaas waxaa ku dhiirigaliyay xusuusta 18 cayaaroy oo ku dhintay diyaarad la degtay sanadkii 1993 iyagoo ka dhoofayay caasimadda librevile.
Sanadkan ayaa la tilmaamayeen in ay koox xoog badan ay u safan tahay, iyagoo damacsan in ay koobka dib u ceshadaan.
Kabtanka Christopher Katongo oo cayaartiisu sare u sii kacday waxaa loo aqoonsaday cayaaryahanka sanadka Africa ee BBC.
Tababare Herve Renard, waxaa uu sheegay in kooxdu ka wanaagsan tahay sanadkii hore. Waxaa uu yiri Hadii aan koobka dib u hanan wayno, macnuhu waa in koox naga wanaagsan ay qaaday. Balse aad ayay u adkaan doontaa in laga adkaado kooxda Zambia.
Ethiopia sagaal jeer ooh ore ayay soo baxday cayaarahan kama dambaysta ah ee Africa. Waxaana ay ku guulaysatay sanadkii 1962.
Iyadoo ka mid ahayd kooxihii wax ka dhisay ururka cayaaraha Africa ee CAF, ayaa waxay noqotay sadex koox oo ka qaybgala furitaankii tartanka sanadkii 1957, waxay ku hartay finalkii balse shan sano kadib oo lagu qabtay dalkeeda ayay ku guulaysatay.
Ethiopia oo hadda ah dalka labaad ee Africa ugu ballaaran, ayaan u soo bixin tartanka wixii ka dambeeyay sanadkii 1982.
Ethiopia ayaa si ay ugu soo baxdo tartankan waxay ka soo adkaatay Sudan, oo cayaartii ka dhacday Khartoum ku badisay 5-3 balse markii la yimid Addis Ababa ay Ethiopia ku adkaaday 2-0, sidaasna Ethiopia ay cayaaraha sanadkan ee koobka Africa ugu soo gudubtay.
Markii ugu dambaysay ee cayaarahan ay soo xaadiraan waxay la cayaareen kooxaha Zambia iyo Nigeria oo hadda ay isku group yihiin. Waxaa Ethiopia looga badiyay 1-0 oo Zambia ku adkaatay iyo 3-0 ay Nigeria ku garaacday Ethiopia. Taageerayaashu ma jecla in natiijadaas lagu celiyo.
Tababare Sewnet Bishaw, wuxuu qirsan yahay in kooxdu u baahan tahay in difaaca ay xoojiso. Wuxuu intaas ku daray in howl adayg iyo wadajir ay awoodoodu tahay.
Isagoo intaas ku daray in tartanka ay ugu soo baxeen maadaama ay tababar culus galeen, isagoo yiri waxaan rajaynayaa in aan cashar ka baranno goolashii qaabka darnaa ee nooga dhashay Khartoum.
Nigeria 16 jeer oo hore ayay tartanka ka soo qaybgashay, waxay ku guulaysatay 1980 iyo 1994.
Waxay kaalinta labaad gashay muddo afar jeer ah, iyadoo kaalinta sadexaadna heshay muddo todoba jeer ah.Waxay wareegga koowaad ku hartay sanadihii 1963 iyo 1982, sanadkii 2008-na waxay dhaafi waysay wareegga labaad ee sideedda koox.
Waxay sanadka u muuqdaan in ugu yaraan ay u qalmaan in ay u gudbaan wareegga labaad, iyadoo ilaa 17 ka mid ah cayaartoyda u dheelaysa ay yihiin kuwo ku cusub tartanka.
Waxaa tababare u ah Stephen Keshi oo 19 sano ka hor kabtan u ahaa kooxdii 2-1 uga guulaysatay dalka Zambia magaalada Tunis. Taageerayaashu waxay filayaan in uu mar kale koobka isagoo macalin u ah kooxda uu qaado.
Cayaaryahanada Chelsea John Obi Mikel iyo Victor Moses, iyo sidoo kale Ikechukwu Uche oo u dheela Villarreal, ayaa laga filayaa in ay kooxda guul u hogaamiyaan.
Waxay Burkina Faso tartanka ka soo qaybgashay ilaa sided jeer ooh ore. Kaalintii ugu saraysay ee ay gaarto waxay tahay tan afaraad oo ay heshay sanadkii 1998..
Dhibaatadooda ugu wayn ayaa ah in aysan awoodin in ay group-ka ay ku jiraan ka soo baxaan, waxay halkan dhaafeen hal mar oo kaliya oo ahayd sanadkii 1998.
Kooxdan oo lagu naanayso fardaha, ayaa shantii cayaar ee ugu dambeeyay oo ay ka soo qaybgalaan waxay noqdeen kooxda leeska dhibcaha ugu hoosaysa.
Sanadkan ayaase tababaraha u dhashay Belgium Paul Put, uu leeyahay kooxna ma yaraysan doonno.
Wuxuu yiri walwalkayga ugu wayn waa kooxda aan waxba laga garanaynin ee Ethiopia, maadaama aan wax badan ka ognahay kooxaha Nigeria iyo Zambia.
Cayaaryahanka ka cayaara Faransiiska Traore ayaa loo saariyaa in uu ma’uul ka ahaa in Burkina Faso ay u soo baxdo final ka dhacaya Koonfur Africa.